Chatbots dia lasa zava-dehibe ho an'ny orinasa mba ho mandeha ho azy ny fifandraisana ara-tsosialy. Customer service dia faritra iray izay chatbots Mety ho tena ilaina tokoa, indrindra fa matetika tsy misy olombelona Serivisy ho an'ny mpanjifa misy. Toerana iray hafa ny fanohanana ny vokatra sy ny tolotra fanompoana manokana chatbots mety ho azo ampiasaina. Iray amin'ireo teknolojia manan-danja izay mihamitombo ny fampiasana ny orinasa. Manampy amin'ny automatique ny fiasan'ny back office ary manolotra ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny valin-kafatra mandeha ho azy amin'ny fanontanian'ny mpanjifa sy ny fangatahana. Mba hanararaotra tanteraka ireo endri-javatra chatbot ireo dia mila mampiasa vola amin'ny famolavolana paikady chatbot ny orinasa. Chatbots miha-mitombo hatrany ny zava-dehibe satria ny orinasa dia mikatsaka ny hanao automatique ny fifandraisana ara-tsosialy satria maro ny olona no tsy mifandray amin'ny olombelona amin'ny alàlan'ny antso an-telefaona. Chatbots Mitombo ny lanjany rehefa mitady fomba hampihenana ny fandaniana amin'ny alàlan'ny fanaovana automatique ny fizotran'ny birao any aoriana ny orinasa ka hanafaka ny loharanon'ny mpiasa. Chatbots mikendry ny hanolotra traikefan'ny mpampiasa namboarina ho an'ny mpampiasa farany tsy mila fifandraisana mivantana amin'ny olona
Inona no ao amin'ny Chatbot?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny atao hoe chatbot. Chatbots dia programa informatika afaka maka tahaka sy maka tahaka ny resak'olombelona amin'ny rindrambaiko. Ireo dia azo ampiasaina amin'ny automatique ny fiasa isan-karazany. Chatbots afaka mihaino, mahazo ny fitenin'olombelona, ​​ary mahomby mahagaga amin'ny famaliana fanontaniana sy fanaovana asa tsotra. Toa mpanjifa nofinofy ho an'ny bot serivisy na inona na inona ? Mba hahatakarana ny fomba nampiasan'ny orinasa teknolojia lehibe chatbots mahasoa ny mitsambikina avy hatrany amin'ny fampivoarana chatbot. Araka ny mety ho fantatrao, chatbots dia nampiasain'ny orinasa lehibe ihany taloha fa efa miampita amin'ny indostria isan-karazany toy ny varotra, karakara ara-pahasalamana, marketing, eCommerce, foibe fiantsoana, sns. Amin'izao fotoana izao, ny chatbot dia ampiasaina amin'ny sehatra samihafa toy ny serivisy ara-bola, serivisy SaaS, mandritra ny aterineto, sy ny maro hafa. Pat Flynn ao amin'ny Falcon Systems dia mampahafantatra antsika fa ny chatbot amin'izao fotoana izao dia azo raisina ho toy ny mpiresaka. Araka ny heviny, mba ho azo raisina ho fifampiresahana ny chatbot dia tsy maintsy: Na dia afaka miady hevitra momba ny hoe (ary hatraiza) ireo fepetra ireo dia mbola mahafeno (ary ny fomba tokony hiheverana ireo fepetra ireo arakaraka ny fampiharana) ny ny zava-misy dia mijanona izany chatbots mihamatotra haingana. Ny fivoaran'ny bot dia mitodika tsikelikely ho toy ny teknolojia amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fandaharan'asa manokana fa tsy mpandraharaha mpanadihady tanteraka. Ny chatbot dia azo mandeha ho azy amin'ny fampiasana script AIML na amin'ny fiteninao manokana amin'ny fampiasana rindrambaiko fanodinana lahatsoratra tsotra toy ny Gmail na Google Docs. Ny zava-misy dia ny dingana etsy ambony amin'ny fametahana script sy ny fanodinana AIML dia dingana haingana sy mora na aiza na aiza alehanao ny bot. Ny hevi-diso mahazatra indrindra dia izany chatbots dia natao ho an'ny tanjona amin'ny fampiasana fomba fifandraisana ara-tsosialy mitovy amin'izany toy ny foiben'ny antso na Serivisy ho an'ny mpanjifa agents. Araka ny lazain'i Eric Foster an'ny Zapier amintsika: "Ny fivoaran'ny chatbot dia ny fananganana rafitra azo ovaina sy azo zahana izay afaka mamaly mora foana mba hahafahana manodin-tserasera ny fifandraisan'ny mpanjifa.
Mitsangàna amin'ny Chatbots
Mamindra ny fifantohana amin'ireo marika ireo chatbots as chatbots dia afaka miteraka fidiram-bola bebe kokoa raha oharina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'izy ireo (CSCI Actuarial 2020). chatbots mba automate ny fifandraisana ara-tsosialy, fohy Serivisy ho an'ny mpanjifa fanantenana ary hivoatra mpanjifa tsy mivadika programa izay manao automatique ny fifandraisan'ny mpampiasa. Chatbots dia ny sasany amin'ireo endrika malaza indrindra amin'ny chatbots ary nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny raharaham-barotra dingana, indrindra amin'ny varotra, fiantohana, banky ara-barotra ary karakara ara-pahasalamana orinasa.
Rehefa niresaka voalohany tamin'ny ankizy karakarain'izy ireo ny mpiasa sosialy dia tsy nanana fomba fahatakarana na fitenenana ilay fiteny nianarany tao amin'ireo kilasy voalamina izy ireo. Ny tontolo iainana dia tsy natsangana mba hahafahan'izy ireo miditra tsara amin'ny tontolon'ny sekoly. Isan'andro dia nangatahina ny ankizy hamaly ny fifandraisany amin'ny mpianatra hafa amin'ny alàlan'ny fampiasana anarana manokana. Na izany aza dia tsy nanampy azy ireo hampivelatra ny fahatakarana ny toe-po ara-pihetseham-pon'ny hafa ao an-tsekoly ary io tsy fananana fangorahana io dia iray amin'ireo olana voatonona matetika amin'izy ireo. Sarotra tamin'ny ankizy ny nahita ny kolotsaina sy ny fomban'ny sekoly amin'ny fitomboany ary nahatonga azy ireo ho sarotra ny mametraka ny maha-izy azy. Ny fianarana amin'ny fiteny iray no tena niavaka olana izay natrehin'izy ireo rehefa voahodidin'ny fiteny amin'ny fiteny hafa, izay niaraka tamin'ny tahotra sao tsy ho voavaha ny lohahevitra iray dia nanery azy ireo hianatra hevitra ara-tsosialy avy amin'ny fiteny izay tsy azony tao amin'ny fampianarana process (Semple, Moore & Green, 2012) Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nandritra ny areti-mifindra manerantany, ireo famantarana ara-tsosialy ireo dia natrehin'ny ray aman-drenin'ny ankizy izay tsy afaka nampidirina tamin'ny fizotran'ny sekoly. Nisedra olana tamin’ny fifampiresahana tamin’ny zanany ireto ray aman-dreny ireto ary matetika no voatery nitantara tamin’ny an-tsipiriany ny zavatra nianarany ary tsy afaka nitondra fanazavana hafa ivelany, raha misy, rehefa niresaka tamin’ny zafikeliny. Fanamby hafa natrehin’izy ireo koa ny fianarana ny fiteny tsy teratany. Ny fametrahana tontolo iray toy ny trano fonenan’ny mpitaiza amin’ilay zaza amin’ny fiteny nianaran’ilay mpitaiza dia fanamby iray hafa nasehon’io fiteny vaovao io, raha toa ka tsy afaka nanorim-ponenana tao amin’ny toeram-ponenany niaraka tamin’ilay fiteny vaovao izy ireo.
Rehefa tonga ny areti-mandringana manerantany, orinasa maro no very ny mpiara-miasa aminy, ny mpanjifa ary ny fahatokisan'ny mpanjifany azy ireo ary tsy maintsy namorona ny tenany izy ireo. Ny fahazarana dia hafatra isan'andro azonao raisina izay mifandraika amin'ny tanjona iray manokana. Misy tombontsoa marobe amin'ny fampiharana ny fahazarana, ao anatin'izany ny fampiasa automatique voalaza etsy ambony, ny fitehirizana ny vidiny ary ny fiantohana ny fifandraisana amin'ny hafa.